ထလော့ မြန်မာ…မြန်မာညီစို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ထလော့ မြန်မာ…မြန်မာညီစို့
Posted by wintayzahlaing on Jun 12, 2012 in Politics, Issues |6comments
ယနေ့ကျနော်တို့နိုင်ငံတွင် လတ်တလော အရေးအကြီးဆုံး ကိစ္စမှာ ကျနော်တို့၏ တိုင်းရင်းသားများ ထဲမှ တစ်မျိုးဖြစ်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ ရင်ဆိုင်နေရသည့် အရေးပင်ဖြစ်ပါသည်
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့သည် ကျနော်တို့နိုင်ငံ၏ အနောက်ဖက်ရှိ လူအင်အားကြီး နိုင်ငံ များနှင့် ဆက်စပ် တည်ရှိသဖြင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် အနောက်ဖက်တံတိုင်းကြီးလည်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်
ထိုတံတိုင်းကြီးကို ခွေးတိုးပေါက်ဖြစ်အောင် ဖွင့်ပေးခဲ့သည့် အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတစ်ချို့ကြောင့် လူမျိုးခြား များ ဝင်လာနိုင်ခဲ့သည်.
သို့သော် ဧည့်သည်က ဧည့်သည်လိုမနေ အကျင့်ပျက်အိမ်ရှင်တစ်ချို့ နှင့်ပူးပေါင်းကာ အိမ်ရှင်ကို မာန်ဖီလာခဲ့သည်
မြန်မာတိုင်းရင်းသား တို့က ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာနေပီး အချင်းချင်း ဧည့်စာရင်းတိုင် ဧည့်စာရင်းစစ် လုပ်နေချိန် တွင် ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သည့် လူမျိုးခြား တို့က အကွက်ချစီစဉ် ၍ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေ ပေါ် အခန့်သားတက်နေ နေကြတော့၏
ထိုအခြေအနေမှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လူဦးရေ အဆမတန် ပေါက်ပွါးလာသော လူမျိုးခြားတို့ မှာ လူတစ်နေရာစာ အိမ်ယာတစ်ကွက်စာ မှ တဆင့် တစ်ရွာစာ နှစ်ရွာစာ တစ်မြို့စာ ဖြစ်လာပြီး ယခုတော့ မိမိတိုင်းပြည်မှ နယ်ပယ်နှင့်ချီကာ ကျူးကျော်လာကြချေပြီ ဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသား ရခိုင်တို့ တောင့်ခံထားနိုင်သည်မှာလည်း ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီကြာနေပြီဖြစ်၏ ယခုတော့ ပေါက်ကွဲလေပြီ
ထိုပေါက်ကွဲမှု အရှိန်ကမသေးလှကြောင်း မျိုးချစ်မြန်မာများအားလုံး ခံစားမိကြမည်ဖြစ်ပါသည်
ကျနော်ဆိုရိုးတစ်ခုမှတ်သားဖူးပါသည် “အိမ်နီးနားချင်း ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ကိုယ့်ခြံစည်းရိုးကိုတော့ အဖျက်ပါနှင့်” တဲ့
ယခုတော့ ကျနော်တို့၏ အရှေ့မြောက်ဖက်ခြံစည်းရိုးကို ချစ်ကြည်ရေးအကြောင်းပြ၍ ချိုးဖဲ့ခဲ့ကြသည်
လူမျိုးခြားတို့က ရှေးနေပြည်တော်ထိ ဝင်ထိုင်လိုက်ကြကာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားဟု ဆိုနေကြသည် စားဝတ်နေရေး ဟူသည့် အရေး(၃) ပါးစလုံး ကို ဌာနေ တိုင်းရင်းသားတို့က သူတို့ကို မှီခိုနေအောင်လုပ်လိုက်နိုင်ကြသည်
အမိဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို လည်း သူတို့ဌာနေ ယူဖို့ကြိုးစားကြပြန်သည် ဒါပေမယ့် မြန်မာ တွေ အချိန်မီ ညီလို့ သူတို့မရနိုင်တော့
ယခု အနောက်ဖက် တခါးကို ချိုးဖျက်ကာ ဝင်ရောက်လာသူတို့ က ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား ရခိုင် တို့ကို စော်ကားကာ နယ်မြေ လုနေပြန်ချေပြီ
ထိုနယ်မြေသူတို့ရလျှင် အမိဧရာဝတီ ကမ်းနဖူးထိ သူတို့လာကြတော့မည်
ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ မြောက်ခြံစည်းရိုးကို သင်ခန်းစာယူကြရအောင်ပါ
ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဖက် ခြံစည်းရိုးကို တော့ လုံးဝ အဖျက်ခံလို့ မရတော့ပါ
ယခု ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်နေသည့် အရေးသည် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား တို့၏ အရေးမျှသာ မဟုတ်တော့ပါ
ကျနော်တို့ မြန်မာ တစ်မျိုးသားလုံး၏ အရေးတကာ့ အရေးကြီးဆုံး အရေးဖြစ်နေပါပြီ
ယခုအခါ လူမျိုးခြားတို့ မှာ လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုလာသည့် သတင်းများ တွေ့မြင် လာရသည် အမျှ အခြားပယောဂ များလည်း ရှိနေကြောင်း အထောက်အထားများလည်း ပေါ်ထွက်လျက် ရှိနေ သည်ကို အားလုံးသတိထားမိကြမည် ဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို့အားလုံး မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး လက်ထက် ကျနော်တို့ နိုင်ငံ၏ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု့မြေပုံ ကို အမှတ်ရကြစေလိုပါသည်
မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး လက်ထက် မြန်မာ့မြေပုံမျိုး နှင့် အလားမတူ ပြောင်းပြန်မြေပုံမျိုး မပေါ်လာစေသင့်ပါ ကမာ္ဘ့ မြေပုံပေါ် မှာ ထပ်အဆွဲခံရမယ့် အရေး နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု သင်ခံစားမိမည် ယုံကြည်ပါသည်
ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေပေါ်မှာ နေထိုင်ရင်း ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သော လူမျိုးခြား တို့၏ ပယောဂကြောင့် ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ်ယာ များကို စွန့်ခွါ ထွက်ပြေးရကာ ဒုက္ခသည်ဘဝ ရောက်ခဲ့ရသည့် ကျနော်တို့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား တို့သည် ဒုက္ခသည် စခန်းများမှ အမြန်ဆုံး မိမိရပ်ရွာအိုးအိမ်များ သို့ အေးချမ်းစွာ ပြန်လည် နေထိုင်နိုင်ရေး နှင့် နောက်နောင် ယခုလို အဖြစ်မျိုး ဘယ်တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွင်မျှ မဖြစ်ပေါ်စေအောင် ကျနော်တို့ တွင် တာဝန်ရှိနေပေပြီ
ကျနော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား မျိုးဆက်များကို ကျနော်တို့ နိုင်ငံ၏ လက်ရှိမြေပုံအတိုင်း လွဲပြောင်းပေးခဲ့ရန်မှာ ကျနော်တို့တာဝန်ကျေရပေမည်
သို့မဟုတ်က နောင်အနာဂတ်တွင် မျိုးဆက်သစ် တိုင်းရင်းသား များက ကျနော်တို့ကို ကျနော်တို့ နောက်ကွယ်တွင် အသုံးမကျသူများဟု ဆဲရေးခြင်းကို မလွဲမသွေခံယူရပေတော့မည်
Win Hlaing has written6post in this Website..
View all posts by wintayzahlaing →
ငွေလေးနည်းနည်းရတာကို အဟုတ်မှတ်ပြီး တိုင်းပြည်ဖျက်နေတဲ့ အမျိုးယုတ်အကျင့်ပျက်တွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေတာ။
ဒီနေ့မနက် venus news ဂျာနယ်မှာ ရခိုင်အမျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီက ဒေါက်တာအေးမောင် ပြောသလိုပဲ အစ္စရေးကို အတုယူဖို့လိုလာပါပြီ။ အစ္စရေးတွေရဲ့ခြေဖျားလေးပဲမှီအောင်နေပါ၊ ဘေးနားကနိုင်ငံတွေကိုသနားတယ်။
အရမ်းကောင်း အရမ်းမှန်တဲ့ ပိုစ့်လေးမို့ လက်မထောင်ပြီးအားပေးသွားပါတယ်။
နေစရာနေရာ အတည်တကျမရှိတဲ့သူတွေရဲ့ နယ်မြေတောင်းပွဲ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် နယ်မြေလုပွဲပေါ့…။ ဘယ်နိုင်ငံကမှ နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မခံတဲ့သူတွေက ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ရောက်ကာစ မြန်မာနိုင်ငံကိုမှ ရွေးချယ်ပြီး မွေးကတည်းက နေလာပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ တိုင်းရင်းသားစာရင်းသွင်းဖို့၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့တောင်းတယ်။ မရတော့ကျတော့ ဆူပူအောင် လုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အာရုံစိုက်လာအောင်လုပ်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ UN တွေကပါ ပါနေတယ်ဆိုတော့….
သမ္မတကြီးကို အရမ်းသနားမိတယ်။ ကချင်က မငြိမ်သေးဘူး..ရခိုင်မှာဖြစ်တယ်…တစ်ဆက်တည်းမှာ အခု အလုပ်သမားတွေကိစ္စနဲ့…
သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်စုတို့ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ်…
ထလော့မြန်မာ…မြန်မာညီစို ့ဆိုတဲ့postကိုလက်မထောင်လို ့
တစ်ကယ်တော့ ကျနော်တို့ တွေ ဝေလေလေ လုပ်နေယင်း နဲ့ သူများစားသွားတာပါ
ခုဆို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ရော ရခိုင်ပြည်နယ် က ခုအရေးအခင်းဖြစ်နေတဲ့ မြို့ရွာတွေမှာ နေကြတဲ့ ကိုယ့် တိုင်းရင်းသားစစ်တွေရောက အိုးအိမ်တွေ မီးရှို့ ခံရ အိုးအိမ်တွေပစ်ပြီး ထွက်ပြေးရနဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်း တွေ ရောက်နေကြပြီလေ ကိုယ့်အသက်တောင် မနဲလုပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရတော့ သူတို့ မှာ မှတ်ပုံတင်တို့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းတို့ ဆိုတာ ပါလာချင်မှပါလာကြတော့မှာ ပျောက်ပျက်ကုန်တာလည်းရှိမှာပေါ့
အခြေအနေတွေအေးချမ်းသွားရင် အဲဒါတွေကို သေသေခြာခြာ စိစစ်ပြီး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေ အခက်အခဲမရှိပြန်လုပ်ပေးရပါမယ်
ကြားကနေအလစ်ဝင်လာမယ့် အခြေအနေတွေကိုလည်း ခွင့်မပြုရအောင် ဝန်ထမ်းပိုင်းတွေက အမျိုးသားရေးသစ္စာရှိရှိနဲ့ ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ပဲ တိုင်းရင်းသားအကျိုး နဲ့ လူမျိုးအကျိုးကြည့်ပီး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ
ကျနော်ပြောခဲ့သလို နောင်အနာဂတ်မှာ ကိုယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေက ကိုယ့်ကို နောက်ကွယ်မှာ ရော ရှေ့ မှာပါ အဆဲမခံချင်ကြပါနဲ့တော့